Madaxweynaha cusub ee Gambia oo si weyn loogu soo dhoweeyay dalkiisa daawo Sawiro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxweynaha cusub ee Gambia oo si weyn loogu soo dhoweeyay dalkiisa daawo Sawiro!!
Madaxweynaha cusub ee Gambia oo si weyn loogu soo dhoweeyay dalkiisa daawo Sawiro!!
Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay caasimada dalkiisa ee Banjuil kadib markii uu dib ugu laabtay dalkiisa si uu awooda ula wareego.
Hogaamiyayaasha galbeedka Afrika ayaa ku qanciyay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yaxya Jammeh inuu xilka baneeyo isbuucii la soo dhaafay. Waxana uu magangalyo u galay wadanka Equatorial Guinea.
Adamu Barrow Madaxweynaha cusub ee Gambia ayaa toddobaadkii hore lagu dhaariyay caasimada dalka Senegel. Barrow ayaa laga dalbaday inuu si deg deg ah dalkiisa ugu noqdo si looga baaqsado in dalku uu hogaamin waayo.
Kumannaan ciidammo ka socdo dalalka galbeedka Afrika ayaa ku sugan dalka Gambia iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidammo wali taabcan jammeh ay ka tirsan yihiin xooggaga amniga Gambia.
Madaxweyne Barrow waxaa safarkiisa ku wehlinayay ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan galbeedka Afrika Maxamed ibn Chambas oo sheegay in Qaramada Midoobay ay gacan ka siin doonto dowladda gambia sugidda amniga.
Previous PostMuuqaal: Soomaalidii Laga soo Celiyey Maraykanka oo ka Warbixiyey Sidii Wax u dhaceen iyo Dhibkii ay soo Mareen? Next PostMadaxweynaha Mexico oo baajiyay booqasho uu ku tegi lahaa Maraykanka!!